ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သို့မဟုတ်မွေးနေ့၏အမေနှင့်အဖေများအတွက်အကောင်းဆုံး 80 စာပိုဒ်တိုများ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Susana godoy | | စာပိုဒ်တိုများ
ဒီနေ့ဟာစုစည်းဖော်ပြဖို့ငါတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် ကြောင်း mom, အဖေများအတွက်စာပိုဒ်တိုများ ၎င်းတို့သည်သူမမွေးနေ့၊ မိခင်များနေ့၊ ဖခင်များနေ့သို့မဟုတ်သင်သူ့ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြလိုသည့်နေ့ရက်များကဲ့သို့အထူးနေ့များတွင်အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကိုမေ့သွားသည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူတို့လုပ်ခဲ့သမျှအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမေ့လျော့နေခြင်းများရှိသော်လည်းမည်သည့်နေ့ရက်တွင်ဖြစ်စေ၊ အထူးရက်စွဲတွင်ဖြစ်စေသူတို့ကိုအမြဲသတိရနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အမေနဲ့အဖေအတွက်ဒီစကားစုအချို့ကသင့်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
2 ဖခင်များအတွက် Phrases
အမေနဲ့အမေနဲ့အတူအမြဲရှိနေမယ့်တစ် ဦး တည်းသောသူကိုတစ်သန်းလောက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပြီးတစ်သက်တာပျော်ရွှင်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုတူညီသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ရှုသူတစ် ဦး တည်းသာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့ခေါ်ဆောင်လာခြင်း၊ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ငါ့ကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေရန်ကြိုးစားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်းရဲ့အချစ်၊ စိတ်ရှည်မှု၊ နားလည်မှုနဲ့ငါ့ပစ္စည်းတွေကိုအမြဲတမ်းသည်းခံမှုအတွက်မေမေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေမေ၊ မင်းကိုငါပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမင်းဟာမင်းကိုအများဆုံးကြိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ အဲဒါကငါ့နှလုံးသားနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲ။
ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးသို့သွားပြီးသင့်အားဈေးအကြီးဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုယူဆောင်လာလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်အတွက်သင်လုပ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံး၊ သင်ခံစားခဲ့ရသမျှနှင့်ကျွန်ုပ်အားအောင်နိုင်ရန်အတွက်သင်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများအတွက်ကျွန်ုပ်ငွေမပေးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည် လူတစ်ယောက်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမင်းသမီးလိုပြုမူဆက်ဆံတာကဘုရင်မကြီးကကြီးပြင်းလာတာကိုပြတယ်။
Queens's Day တွင်အမေ့ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာနံပါတ် ၁ ဖြစ်ခဲ့တာ၊ ငါ့ကိုမေမေကံကောင်းခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်မေမေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါနောက်တဖန်ကလေးပြန်ဖြစ်ရန်မဟုတ်, အချိန်ပြန်သွားနိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိပေမယ့်ငါပို။ ပို။ လွဲချော်သောငါ့အမိကိုနမ်း။
ကျွန်တော့်ကိုအသက် ပေး၍၊ ဒီကမ္ဘာကြီးကိုသိအောင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်အောင်ခွန်အားပေးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေမေ။
မေမေလဲလဲချိန်မှာထတယ်၊ ဆက်မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကူညီပေးခဲ့တယ်၊ မင်းရဲ့စံနမူနာပြ၊ မင်းမှာရှိသမျှကိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေမေ။
မင်းအတွက်အိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့မလွယ်ကူပေမဲ့“ ဟုတ်တယ်” လို့ပြောပြီးငါ့ကိုဒီလောကဆီခေါ်ဆောင်လာခြင်းအတွက်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ချစ်ခင်ခြင်းတို့သည်ဘဝရှိမိခင်တစ် ဦး နှင့်ဘယ်တော့မျှမတူပါ။
ယနေ့သင်၏မိခင်အားနမ်းခြင်း၊ နမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျေးဇူးတင်စကားဖြင့်မနက်ဖြန်အတွက်မထားခဲ့ပါနှင့်။ သူမသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
အခြားလူတိုင်းရပ်တန့်သည့်အခါမိခင်တစ် ဦး ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသာလျှင်သူမ၏ကလေးကိုထောက်ပံ့သည်။
အခြားမည်သူမျှမယုံကြည်သည့်အခါမိခင်တစ် ဦး ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သာယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
မည်သူမျှနားမလည်နိုင်သည့်အခါမိခင်တစ် ဦး ၏မေတ္တာသာခွင့်လွှတ်သည်။
မိခင်တစ် ဦး ၏မေတ္တာသာမည်သည့်စမ်းသပ်မှုကိုမဆိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
မိခင်တစ် ဦး ၏မေတ္တာထက်အခြားမြေကြီးဆိုင်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိပါ။
မိခင်တစ် ဦး တည်းသာမိခင်ကိုဂုဏ်ပြုနိုင်သည့်ခြွင်းချက်မရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်!
ဤအိမ်၏ဘုရင်မ, ဇနီးနှင့်မိခင်ရန်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ငါ့ကိုဘ ၀ ၏အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်အလှဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေးခဲ့သောကျွန်မ၏မိခင်အားကျေးဇူးတင်စကားတစ်ထောင်။
ကြယ်များထက် ပို၍ ထွန်းလင်းသောမိခင်များသည်လထက် ပို၍ နူးညံ့ကြပြီး၊ နေများထက်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍ ကျွေးမွေးကြသည်။ သင်၏တစ်နေ့တာအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်!
မိခင်တစ် ဦး ၏နှလုံးသည်ကလေးတစ် ဦး အတွက်အလှဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးဘယ်သောအခါမျှဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်။
မိခင်တစ် ဦး ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လူကိုမဖြစ်နိုင်စေနိုင်သောလောင်စာဖြစ်သည်။
မိခင်တစ် ဦး ၏ကလေးအပေါ်ထားရှိသောမေတ္တာကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားအရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ သူသည်မည်သည့်ဥပဒေနှင့်ကရုဏာကိုမျှမသိ၊ မည်သည့်အရာကိုမဆို လုပ်၍ သူကိုဆန့်ကျင်သောအရာအားလုံးကိုချေမှုန်းသည်။ Christie Agatha
သင်၏နွေးထွေးသောကြင်နာမှုကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သည့်အခါကမျှသင့်မိခင်ထက် ပို၍ နက်ရှိုင်းစွာ၊ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော၊ Balzac
မိခင်တစ် ဦး ဆိုသည်မှာသင်၏အောင်မြင်မှုအားလုံးရှိသော်လည်းသင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်လိုမင်းကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်နေသူဖြစ်တယ်။
သင့်ကိုအစဉ်အမြဲချစ်မြတ်နိုးပြီးသင့်ကိုမစွန့်ပစ်သူတစ် ဦး အားမရှာဖွေပါနှင့်။ သင့်မှာရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ မင်းအမေလား
မိခင်တစ် ဦး ၏နှလုံးသည်ဘယ်သောအခါမျှချိုးဖျက်ခြင်းမခံရနိုင်သည့်ခံစားချက်မြို့တော်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအမြဲတမ်းနှင့်အချိန်တိုင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာတွက်ချက်နိုင်သည်။
စကြာ ၀ inာ၌အံ့ဖွယ်အမှုများများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာသည်အမေ၏စိတ်နှလုံးဖြစ်သည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်မေမေ
ပျော်ရွှင်ခြင်းမိခင်များနေ့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ငါပေးမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ငါပေးသည်။ ပျော်ရွှင်သောမိခင်များနေ့နှင့်သင်အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိပါစေ။
ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့ကြီးမားလှတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်၊ ငါ့ကိုအခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှစိတ်မပျက်စေရ၊ ငါ့ကိုသစ္စာစောင့်။ အစဉ်မပြတ်စောင့်မတော်မူလိမ့်မည်။ ငါ၌အစဉ်သစ္စာရှိလိမ့်မည်။
ငါ့ခမည်းတော်အဘို့ ... ဂုဏ်ယူပါတယ်!
မင်းကိုငါလွမ်းတယ်၊ မင်းဆီကနေငါပွေ့ဖက်ချင်တယ်၊ ငါ့ရဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့စိတ်ကိုတောင်ဖယ်ထုတ်ပြီးအသက်တာအတွက်ခွန်အားဖြည့်ပေးတယ်။
အိုအဘ၊ ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသည်မှန်သောကြောင့်၊ အဖေများနေ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဖခင်! အစဉ်အမြဲငါ့အနားမှာဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ...
အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဖခင်သည်အက္ခရာငါးလုံးသာရှိသည်။ သို့သော်ဖခင်တစ် ဦး ၌မူထောက်ပံ့မှု၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ အပ်နှံခြင်း၊ ခြွင်းချက်မရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်နားလည်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုအများကြီးပေးတဲ့အတွက်အဖေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်ပုံစံကိုမချစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရာရာတိုင်းနှင့်မချစ်ဟုမဆိုလိုပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်သောသူများရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုမပြနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ချစ်သောကြောင့်အဖ ကျေးဇူးတင်၍ ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေ၊ နှစ်ပေါင်း ၂ ဝကြာအောင်ငါတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာသစ်ပင်ကြီးထွားလာအောင်လုပ်ပြီးအခုတော့ငါတို့ဟာအသီးကိုစားပြီးပျော်မွေ့နိုင်ပါပြီ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်အဖေ, သင်ဝေးဝေး၌ပင်လျှင်, တည်ရှိနိုင်ကြောင်းအကြီးမြတ်ဆုံးချစ်ခင်အတူသင်တို့ကိုချစ်၏။
ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဏ္asuresာများဖြစ်ကြပြီးသင့်အဘသည်သူတို့တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဖခင်ကိုပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ အဖေ၊ မင်းအတွက်ဘုရားသခင်အတွက်ငါအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်မှာပါ။
မိဘများကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင်သန်းချီရှိနေသော်လည်းသင်တို့ကဲ့သို့ချစ်သောဖခင် ... မရှိ။ အဖေများနေ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဘ ၀ ၏အခက်အခဲများကိုကယ်တင်ခြင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ကိုကျော်လွှားရန်သင်ကြားပေးသောကြောင့်အဖကျေးဇူးပါ။
ဖေဖေငါသင့်ရဲ့အကြံဥာဏ်, ချစ်ခင်, သင်၏ထောက်ခံမှုနှင့်သင်၏ထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့ဘယ်တော့မှနိုင်အောင်, သင်နေ့ရက်များ, လများ, နှစ်ပေါင်းနှင့်သင်အစဉ်အမြဲငါအနားမှာနေဖို့ချင်တယ်။ အဖေများနေ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အဖေ၊ မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့မင်းကိုအမြဲတမ်းယုံနိုင်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒီနေ့မင်းလုပ်ခဲ့သမျှတွေအတွက်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပျော်ရသောဖခင်များနေ့ကိုငါချစ်တယ်
ဖခင်တစ် ဦး သည်သား၏ပထမဆုံးသူရဲကောင်းဖြစ်ပြီးသမီး၏ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။
ဖခင်တစ် ဦး ၏သားသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးအမွေမှာတစ်နေ့တာ၏အချိန်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်စရာအဖေများနေ့ပါ!။
အဖေ၊ မင်းကိုaရာမအဖြစ်ငါမြင်တဲ့အခါငါကလေးဘဝကိုအမှတ်ရနေတယ်။ ဒီနေ့ငါကြီးလာပြီ၊
ကြင်နာမှု၊ ကြင်နာမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောမိတ်ဆွေနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကလေးများ၏ဘဝသည်ဖခင်ကောင်းတစ် ဦး ၏အရိပ်တွင်ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းသွားခဲ့သည်။ ပျော်ရွှင်သောနေ့ !.
ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘုရားသခင်နောက်သို့ လိုက်၍ ဖခင်တစ် ဦး ရောက်လာသည်။ (Mozart) ။
ဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်အမြစ်တွယ်နေသည်။ ၎င်းသည်သတ္တိနှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားဖြင့်ဘဝကိုလက်ချင်း တွဲ၍ သင်ကြားပေးနေသည်။ ပျော်ရွှင်သောနေ့ !.
မိဘတစ် ဦး ဆိုတာသင်ငိုတဲ့အခါသင့်ကိုကူညီတဲ့သူ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အခါမင်းကမင်းကိုမင်းတို့ကမင်းကိုမင်းကမင်းတို့ကမင်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးမင်းကိုမယုံရင်တောင်မင်းကိုဂုဏ်ယူတယ်။
ညီအစ်ကိုသည်နှစ်သိမ့်တတ်၏။ အဆွေခင်ပွန်းသည်ဘဏ္aာဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း၊ (Franklin) ။
မိဘတစ် ဦး သည်ဆရာတစ် ဦး ၏ဉာဏ်ပညာနှင့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ၏ရိုးသားမှုရှိသည်။ ပျော်ရွှင်စရာအဖေများနေ့ပါ!။
ငါမှားသွားရင်မင်းငါ့ကိုကူညီပေးတယ် ငါမင်းကိုအကြံဥာဏ်ပေးမယ်လို့ငါသံသယဖြစ်တဲ့အခါမင်းကိုငါခေါ်တဲ့အခါမင်းငါ့ဘက်မှာရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေ။
ဖခင်တစ် ဦး သည်သင့်ကိုသူ၏လက်မောင်းများထဲမှခေါ်ဆောင်သွားပြီးအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရချိန်တွင်သင့်ကိုကူညီပေးသူတစ် ဦး မျှသာမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်သူသည်သင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ပို့ဆောင်။ သင့်အားမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသောသူလည်းဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်စရာအဖေများနေ့ပါ!။
ယခုအချိန်အထိအမေနှင့်အဖေတို့၏အသုံးအနှုန်းများသည်မင်းတို့အားသူတို့ကိုပျော်မွေ့စေလိုပြီးသင်ရှာဖွေနေသည့်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆိုအသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုသိလိုစိတ်ဖြင့်သာဖတ်ရှုပါကသင်၏မိဘများအတွက်မည်မျှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်နှင့်သင်၏ဘဝတွင်၎င်းတို့အားမည်မျှကျေးဇူးတင်ရကြောင်းကိုသတိမပေးဘဲအချိန်ရှိပါကသင်၏မိဘများအတွက်အသေးစိတ်အနည်းငယ်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » ကျေးဇူးတင်ကြောင်းသို့မဟုတ်မွေးနေ့၏အမေနှင့်အဖေများအတွက်အကောင်းဆုံးစာပိုဒ်တိုများ